२०३६ सालको विद्यार्थी आन्दोलन हेरिकन हालको विद्यार्थी आन्दोदलन किन यतीसुस्त गतिमा?
हामी यहि नेर गलत छौँ । हामीले त्यहिँ गल्ती ग¥यौँ जहाँ हामीले राजनीति नपढेका र मजबुर मान्छेहरुले मात्र राजनीति गर्नुं पर्छ भन्ठान्यौँ । के उसो भए शिक्षितहरुसबैले या त जागिर खाने या कुनै दोस्रो तेस्रो मुुलुकको नागरिकता स्विकारेर देश छाड्ने ? अनि राजनीति खराब र भ्रष्टाचारीहरुको हातमा सुम्पेर देश विग्रिएकोमा जिवनभर सरापेर बसी रहने ? हामी शिक्षत र पठित हौँ भन्नेहरुको बुझाई यहीँ गलत रहेको मेरो ठम्याई हो । र अर्को कुरा राजनीति सबै नीतिहरुको पनि माउ नीति हो । यसलाई सुधारेर मात्र हामी असल राजनीतिक व्यवस्थामा टेक्न सक्छौं ।